सिके राउत ओलीका मतियार : सोनल
राष्ट्रिय जनता पार्टीका महामन्त्री एवं प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल सरकारसँग हालै सम्झौता गरेका सिके राउतलाई नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको मतियार बताउँछन् । जनमत संग्रहको कुरा गरेर राउतले समर्थकलाई ठग्ने काममात्र गरेको उनको भनाइ छ । सिके राउतको अवतरण र मधेसको राजनीतिमा पर्न सक्ने प्रभावलगायतका विषयमा नेपाल समयका लागि धैर्यकान्त दत्तले मन्त्री सोनलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सम्झौतालाई राजपाले कसरी लिएको छ?
राजपाले बैठक बसी आफ्नो सार्वजनिक धारणा गर्छ । तर व्यक्तिगत मलाई सोध्ने हो भने नामैदेखि प्रायोजितजस्तो देखिन्छ । नामैको कुरा गरौं न व्यक्ति नाम संस्था सबै प्रायोजित देखिन्छ । स्वतन्त्र मधेस भनेको अतिवादजस्तो देखिन्छ । हामीले के भन्न खोजेको, के गर्न खोजेको र मधेसी जनताको चाहना के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्दछ ।
हामीले के भन्या थियौं भने नेपाल देशभित्र मधेसी जनताको जे पहिचान छ, थिचोमिचोमा पारिएका छन् पहिचानलाई स्थापित गराउँदै अधिकारसम्पन्न स्वायत्ततासहितको मधेस प्रदेश स्थापना गर्ने । अब यो महत्त्वपूर्ण र राजनीतिक कुरा हो । यसलाई गैरराजनीतिक बनाउन मुद्दा डाइभर्ट गर्न कुनै एउटा शक्तिले कुनै एउटा व्यक्तिलाई प्लान्ट गर्छ । राम्रो कुरामा भाँडभैलो मच्चाउन अस्तित्व समाप्त पार्न कुनै व्यक्ति प्लान्ट गरिन्छ । मधेसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने जायज कुराको विरुद्ध स्वतन्त्र मधेसको कुरा गरियो, यो आफैमा प्लान्टेड विषय हो ।
त्यसो भए मधेस आन्दोलनविरुद्ध सिके राउत परिचालित भएका थिए भन्न खोज्नुभएको हो ?
एकदम । दुनियाँमा यस्तै देखिएको छ । कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समाप्त पार्नु छ भने आफ्नै मान्छे लगाएर खलबल मचाएर दमन गर्ने काम भएको छ । अधिकार र पहिचानको लागि मधेस आन्दोलन अगाडि बढिरहेका बेला खत्तम बनाउन एउटा अतिवादको कुरा ल्याइदिऊँ । र, त्यो अतिवादी मानिसले के गर्छ भने वास्तविक मुद्दालाई अन्यत्र मोड्ने काम गर्दछ । मुद्दा डाइभर्ट भइसकेका बेला सप्रेस गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसको प्रमुख पात्र तथा मतियार बनेर सिके राउत र उनको संगठन स्थापित भयो ।
सिके राउतलाई कसले प्लान्ट गरेको हो ?
यस विषयमा धेरै कुरा निकट भविष्यमै खुल्दै जान्छ । तर तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपाको नेतृत्वबाट यसको लिंकेज भयो । किनभने उहाँहरु पनि एउटा प्लान्टेड शक्ति हुनुहुन्छ । कुनै शक्तिबाट प्लान्टेड भएर उहाँहरुको जन्म भएको सर्वविदित छ । सबै ट्रेन्ड उहाँहरुलाई थाहा छ । उहाँहरुलाई के लाग्यो भने कसैलाई प्लान्ट गरेर मधेस आन्दोलन समाप्त गरिदिँदा ठिक हुन्छ कि । त्यसैले उहाँहरुले यस्तो गर्नुभएको हो ।
सिके र सरकारबीच अचानक सम्झौता हुँदा तपाईंलाई आश्चर्य लागेन ?
वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ । शक्ति सन्तुलनका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्दछ । तर अहिले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलार्ई निस्तेज पारेर एउटै पार्टी, एउटै पार्टी र एउटै चरित्र भएको व्यक्तिलाई स्थापित गर्न खोजिँदैछ । यहाँ के देखियो भने न्यायालयदेखि सबै कुराको सेटिङ गरेर अचानक सम्झौता गरियो । यो कुरा मैले मात्र होइन काठमाडौंका बुद्धिजीवीले पनि भनिरहनुभएको छ । न्यायालय सेटिङको प्रतिफल सिके राउत हुनुहुन्छ ।
सिके राउतजी जानी नजानी वा जानेरै अहिलेको कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको मतियार बन्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, बिस्तारै उहाँले पनि थाहा पाउनुहुनेछ । यसले मुद्दा पनि कमजोर भयो सेरेन्डर गरेर सिके राउतले मधेसलाई लज्जाबोध गराउनुभएको छ । उहाँले उठाउनुभएको कुरा मुद्दै होइन । प्लान्टेड शक्ति र प्लान्टेड व्यक्तिका रुपमा आफूलाई अगाडि बढाउनुभयो । ढिलोचाँडो पक्कै पनि उहाँलाई अनुभूति हुनेछ । सरकारसँग भएको सहमतिको कुनै तुक छैन ।
सहमतिको एउटामात्र सकारात्मक कुरा केहो भने राउतजीलाई संसदीय राजनीतिको विकल्प छैन भन्ने कुराको ज्ञान ढिलै भए पनि भएको छ । मूलधारको राजनीतिमा आउनुभएको छ त्यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसअघि उहाँले गर्नुभएको ढोंग पनि सकिएको छ । समयमै सबै जनताले वास्तविक स्थिति बुझ्न पाए ।
सिके राउतसँग सहमति गरेर सरकारले 'स्वतन्त्र मधेस' लाई मान्यता दियो हैन ?
मैले भनें नि स्वतन्त्र मधेस शब्द नै मधेसी अधिकारका लागि लडिरहेको शक्तिलाई निस्तेज पार्ने रणनीतिका रुपमा आएको हो । जो यसको प्रतिपादक थियो, जसले यसलाई उत्पादन गरे उसैले यसलाई चपायो ।
हाम्रो संविधानअनुसार स्वतन्त्र मधेस भनिएझैं स्वतन्त्र कर्णाली, स्वतन्त्र गण्डकी भन्न मिल्छ ?
यो सर्वाधिक अराजनीतिक कुरा हो । यस्ता कुरा कुनै पनि हालतमा भन्न मिल्दैन ।
त्यसो भए राष्ट्रवादको चर्को नारा दिने नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के भन्नुहुन्छ ?
केपी ओली पहिले पनि राष्ट्रवादी हुनुहुन्थेन र अहिले पनि हुनुहुन्न । हामी सबैले उहाँलाई चिनेका छौं । संयोगले उहाँ एउटा शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । राष्ट्रियता र जनताका पक्षमा कुनै बेला लड्नुभएको थियो होला । कसले लडायो किन लडायो हामी सबैले पढेका छौं । कसरी राजा महेन्द्रले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारबाटै सञ्चालन गरेर फन्डिङ गरेर स्थापित गराए, केका लागि स्थापित गराए, कसरी झापा काण्डको प्रादूर्भाव भयो यी सबै कुराको इतिहास साक्षी छ ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो परिवर्तन केपी ओलीजी र उहाँको पार्टीलाई डाइजेस्ट भइरहेको थिएन । त्यसैलाई असफल बनाउन विभिन्नखाले रणनीतिक षड्यन्त्र हुँदै गए । त्यही रणनीतिक षड्यन्त्रको एउटा पाटो राष्ट्रियताको नारा हो । हामी आन्दोलन गरिरहँदा 'बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न, संघीयता कुनै हालतमा यो मुलुकलाई सुहाउँदैन' जस्ता अभिव्यक्ति दिने मानिस हुनुहुन्छ ओलीजी । मधेसलाई गाली गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने कुरा धेरै दिन चल्दैन, जनताले सबै कुरा बुझिसकेका छन् ।
सिके राउत र उनका कार्यकर्ताले भनिरहेझैं जनमतसंग्रह सम्भव छ जस्तो लाग्छ ?
जनमतसंग्रहको 'ज' पनि उल्लेख छैन सम्झौतामा । सिके राउतको वक्तव्य सुन्नुभएन ? के भन्नु भएको थियो, उहाँले । उहाँले 'म नेपाल देशको सबै कुरा स्वीकार गर्छु, अखण्ड नेपाललाई स्वीकार गर्छु, विधि प्रक्रियालाई स्वीकार गर्छु' भन्नुभएको थियो । कुन ठाउँमा जनमत संग्रहको कुरा लेखिएको छ ? भाषालाई जेरीजस्तो घुमाउरो बनाएर जनतालाई ठग्न पाइन्छ ? कुन बुँदामा लेखिएको छ जनमत संग्रह भनेर सिके राउत डिबेट गर्नुस् त । जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह हो भने सहमतिपत्रमा लेख्नुपर्दथ्यो नि ? किन लेखिएन ? कुन विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने ? जनमतसंग्रहको कुरा गरेर राउतजीले जनतालाई ठग्ने र आफ्नो फेससेभिङ गर्ने काममात्र गर्नुभएको छ ।
सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले बढी स्पेस दिएजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
ओलीजीलाई लाग्यो सिके राउतलाई ल्याएर स्थापित मधेस केन्द्रित पार्टीको समानान्तर शक्ति खडा गर्न सकिन्छ । उहाँले त राउतजीलाई मन्त्रिपरिषद्मै ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्मै ल्यानुपर्ने भए तत्काल नेकपाको सदस्यता दिए भइहाल्यो नि । उहाँहरुसँग धेरै मधेसी नेताहरु हुनुहुन्छ । त्यसमा एकजना सिके राउत पनि थपिनुहुन्छ । स्वतन्त्र मधेसको ढोंग किन गर्नुपर्‍यो ।
सिके राउतको अवतरणले मधेसको राजनीतिमा राजपालाई के कति असर पार्न सक्छ ?
राजपा कुनै हावामा आएको पार्टी होइन जसलाई कोही आउनेबित्तिकै असर हुन्छ । मधेसी जनताको चाहना र भावनाबाट राजपा बनेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्ने पार्टी हो । कुनै एउटा व्यक्ति आउँदैमा राजपालाई कुनै असर पर्नेछैन ।